ကွန်ပျူတာမှာ auto shutdown ဖြစ်နေလ်ို့ စိတ်ညစ်နေလား.....? ~ ပေါက်ခေါင်း သတင်း
ကွန်ပျူတာမှာ auto shutdown ဖြစ်နေလ်ို့ စိတ်ညစ်နေလား.....?
ဒီကောင်လေးကိုသာသုံးလိုက်ပါကွန်ပျူတာကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုလို့ ရနိုင်တဲ့ ဆော့ ဝဲလေးမို့ မိတ်ဆက်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ကလစ်တစ်ချက်တည်းနိပ်ရုံနဲ့ ဟက်ဒစ်ရဲ့ space တွေကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမယ်အပြင်။ပြန့် ကျဲနေတဲ့ 
ဖိုင်တွေကိုစီစဉ်ပေးခြင်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချက်အလက်တွေ ကို ပြန်လည်ရယူပေးခြင်း ဆော့ ဝဲတွေ နှင့် ဂိမ်းတွေ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြုပ်နှံ ထားနိုင်ခြင်း ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်တွေကို ခြေရာခံမရနိုင်အောက်ကာကွယ်ပေးခြင်းအပြင် အကောင်းဆုံးနဲ့ အထူးအခြားဆုံးကတော့မိမိရဲ့ စက်ကိုလျှင်မြန်အောင်ကူညီပေးမည့် အပြင် Windows Registry ထဲအထိပါအနက်ရှိုင်းဆုံးကာကွယ်ပေးပါတယ်။အသုံးပြုပုံကလည်းလွယ်သလိုဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 8 MB ထဲဆိုတော့ အဆင်ပြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ keygyen လေးထည့် ထား
ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။keygyen မသုံးတတ်သေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ကတော့set-up file ကိုအရင် run ပါနော်။ပြီးတာနဲ့keygyen file ကို generate လုပ်ပြီးရလာတဲ့key ကိုကော်ပီယူပြီး register key နေရာမှာဖြည့် ထည့် ပေးပါ။ဆော.၀ဲမြို.တော်မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ ပေါက်ခေါင်းသတင်း